Saxafi mise sirdoon ? - BBC News Somali
Saxafi mise sirdoon ?
Image caption Siciid Jituur
Qoyska saxafi lagu magacaabo Siciid Jituur oo u dhashay dalka Algeria ayaa ku dadaalaya sidii ay usoo furan lahaayeen saxafiga oo ku xiran dalka Spain, halkaas oo loo haysto dacwado la xiriira basaasnimo.
Wariyaha BBC-da Lucy Ash ayaa qoraalkan uga hadlaysa waxa ay ka taqiinay saxafigan.
Markii aan la shaqeeyay Siciid waxaan aad ugu xusuustaa qosolkiisii gaarka ahaa, soo dhaweyntiisii diiranayd, iyo waliba majaajiladiisii, taas oo marar badan naga caawisay in aan waraysiyo ka helno mas'uuliyiinta dowladda, culumada diinta iyo waliba dadka iska caadiga ah.
Waxaa sidoo kale aad ii cajab galiyay aqoonta durugsan ee uu u lahaa taariikhda.
Labo sano ka hor waxa uu caawiyay gabadh ku xeeldheer taariikhda oo u dhalatay Britain oo lagu magacaabo Mary Beard iyo dadkii xagga kaamirada kala shaqaynayay si ay u duubaan magaalada Timgad oo la dhisay 100 sano ka dib dhimashadii nabi Ciise, waxaana dhisay magaalada boqorkii Trajan.
Rai’sul wasaaraha dalka Algeria oo shaqada laga ceyriyay
Morooko oo ku eedaysay Algeria in ay qoxooti Suuriyaan ah dalkeeda galisay
Aljeeriya oo xirtay nin daaqad ka soo laadlaadiyay canug
"Xusuus aad u wanaagsan ayaan ka heystaa Siciid, wuxuu ahaa nin cajiib ah oo wax kasta oo uu samaynayo ku habboon , shactiro badan, maangal ah, naguna hagay meel kasta oo habboon intii aan filimka taariikhda ah duubaynay" ayay tiri Mary.
Mar aan shaqo u tagay magaalada Algiers , Siciid waxa uu mariyay waddooyinka luuqyada ah ee xaafadda Kasbax ee magaalada caasimadda ah, wuxuuna garanayaa taariikhda dhismo kasta oo aan ag marnay.
Image caption Xaafadda Kasbax waxa ay ka mid ah meelaha ay aqoonsatay hay'adda UNESCO
Waa 54 jir , waxaa la dhashay 8 wiil, shaqadiisii horana waxa ay ahayd in uu hago dalxiisayaasha.
Markii lasoo gaaray sanadihii 1990-meeyadii, Siciid waxa uu bilaabay in uu la shaqeeyo wariyeyaasha iyo dadka duuba barnaamijyada, isaga oo gacan ka siinayay in ay helaan dadkii ay waraysan lahaayeen, iyo hagista meelihii ay tagi lahaayeen.
Waxa ay ahayd xiligii ciidammada dalkaasi ay laaleen natiijadii doorashada oo ay markaas ku guuleysteen xisbiyadii diinta islaamka u ololaynayay, kadibna waxaa dhashay dagaal sokeeye oo ay ku dhinteen wax ka badan 150,000 qof.
Waxa ay ahayd xili aad u adag, balse isaga waxaa u suurtogali jirtay in uu safro, dadkana la hadlo.
Hooyadiis oo baaq u dirtay madaxweynaha Algeria Cabdicaiis Butafliqa si loosoo daayo wiilkeeda, waxa ay sheegtay in dad badan ay doorteen in ay dalka ka cararaan xiligaas, balse isaga uu dalkiisa iska joogay, diidayna in uu ka tago.
Image caption Militariga Algeria ayaa laalay natiijadii doorashooyin ay ku horeeyeen xisbiyada Islaamka
"Qalinkiisa ayuu ugu dagaalamay , tamartiisa oo dhan ayuu ku bixiyay sidii usoo bandhigi lahaa wanaagga Algeria" ayay qortay hooyadiis.
Siciid wuxuu la shaqeeyay wariyeyaal badan oo BBC-da ka hawlgala, iyo kuwa wakaaladaha wararka u shaqeeya oo ka yimid dalalka Faransiiska iyo Maraykanka. Wuxuuna ahaa saxafi shaqadiisa la jecelyahay.
5tii bishii June isaga oo markaas kasoo laabtay dalka Spain, ayaa la xiray , waxaana la geeyay xabsiga Al Xaraq oo ah kan ugu weyn dalka Algeria.
Waxaa lagu eedeeyay in warar xasaasi ah uu siiyay sirdoonka dalal shisheeye, balse Siciid waa uu beeniyay eedeyntaas.
Garyaqaanada u doodaya Siciid waxa ay sheegeen in uusan galaangal u lahayn sirta dowladda, sidaasi darteedna aysan suurtogal ahayn in uu bixiyo xog sir ah.
Dowladda wali kama aysan hadlin arrinka Siciid, waxayna iska dhago marisay codsiyo badan oo aan u gudbiyay si ay sharaxdo sababta loo xiray.
Dhawr jeer ayaa maxkamad lasoo taagay, garyaqaanadiisana waxa ay sheegeen in aanan lasoo bandhigin wax caddaymo ah oo muujinaya wax dambi ah oo uu galay.
Image caption Qoyska Siciid Jituur
Sida uu qabo qodobka 65 ee xeerka ciqaabta dalkaas, haddii qof lagu helo in uu gudbiyay dokumentiyo amniga qaranka halis ku ah, waxaa la xukumayaa 25 sano oo xabsi ah.
Hay'adda wariyeyaasha aan xudduuda lahayn ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin xariga Siciid, waxayna ku baaqeen in la siidaayo.
Algeria ayaa liiska wariyayaasha dhibaateeya kaga jira nambarka 134aad, dalalkaas oo dhan 180 dal.
Siciid walaashiis oo lagu magacaabo Caaliya oo degan dalka Canada ayaa sheegtay in ay xabsiga ku booqatay bishii Agoosto, "Aad ayuu u caatoobay, xitaa lama aqoonsan karo, wuxuu qabaa xanuunka macaanka, anaga oo dhanna waan ka walwalsanahay" ayay tiri.
Image caption Dad badan ayaa la la'yahay tan iyo intii uu dhacay dagaalkii sokeeye
Warqadda ay hooyadiis u qortay madaxweynaha ayay ku sheegtay in xaaskiisa oo ah dhaqtarad qaliinka oo ka shaqaysa isbitaal maxali ah iyo 3diisa caruur ah ay la muraaro dilaaceen xarigga Siciid.